Sarimihetsika Marketing Kenshoo Paid Digital: Q4 2015 | Martech Zone
Alarobia, Febroary 17, 2016 Talata, Febroary 16, 2016 Douglas Karr
Isan-taona dia mino aho fa hanomboka hiakatra ny zava-drehetra, saingy isan-taona dia miova tanteraka ny tsena - ary tsy nisy tsy nitovizany ny 2015. Ny fitomboan'ny finday, ny fiakaran'ny doka misy ny vokatra, ny fisehoan'ny karazana doka vaovao izay nahatonga ny fiovana lehibe teo amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny vola lanin'ny mpivarotra.
Ity infographic vaovao avy amin'ny Kenshoo dia nanambara fa ny fiarahamonina dia nitombo be teo amin'ny tsena. Ny mpivarotra dia mampitombo ny fandaniany ara-tsosialy amin'ny 50% YoY, ary ny tahan'ny click-through dia nitombo 64%. Ireo antony lehibe: ny fivoaran'ny Facebook haingana ho sehatra dokambarotra mahery vaika, ary ny fampidirana doka Instagram.
Raha ireo tarehimarika ireo dia maneho ny fitohizan'ny fananganana Hafanàm-po an-barotra over varotra nentim-paharazana, Tsy mino aho fa milaza an'ireto tantara ireto ireo isa ireo. Ny fiakarana lehibe amin'ny doka ara-tsosialy dia fiovana miavaka. Te-hahita fizarazarana karazana dokambarotra aho - mampiroborobo ny atiny mifandraika ve izy ireo? Sa vokatra dokam-barotra izy ireo? Tsy isalasalana fa handeha tsara eo amin'ny lafiny vokatra ny Instagram, saingy tsy ho gaga aho raha toa ka ny marketing dia mifandraika amin'ny atiny ny fitomboan'ny doka ara-tsosialy.
Tsy isalasalana fa handeha tsara eo amin'ny lafiny vokatra ny Instagram, saingy tsy ho gaga aho raha toa ka misy fitomboan'ny doka ara-tsosialy varotra mifandraika amin'ny atiny. Ny hevitro manetriketrika fotsiny, fa mbola mino aho fa ny tetikady fanaovana dokam-barotra dia tsy mitovy amin'ny sehatra rehetra. Rehefa manao doka amin'ny Facebook izahay dia manohy mitaona ireo mpijery kendrena be lavitra amin'ny resaka ara-tsosialy sy amin'ny lahatsoratra, sary na horonan-tsary maharesy lahatra.
Saingy rehefa manao dokambarotra momba ny varotra vokatra amin'ny sehatra toy ny Instagram izahay dia afaka mamily mivantana ilay mpampiasa avy amin'ilay sary (izay manana ny sain'izy ireo irery tsy misy resaka) ao anaty fandefasana fiovam-po. Mino aho fa io dia doka amin'ny doka ara-tsosialy izay tsy voadinika tsara nefa tokony.
Tags: 2015tsindrio ny tahaCPCSary torohaykenshoofironana doka findayFivarotana finday sy tablettekarazana doka vaovaomandoa isaky ny kitihoppcdoka lisitra vokatrafironana dokam-barotrasary fakantsary fikarohanafironana fanaovana dokam-barotrasary fikarohanafironana doka ara-tsosialysary momba ny doka ara-tsosialyfironana dokam-barotra sosialysary ara-tsosialy
Insert.io: Sehatra fampiroboroboana finday Codeless